एकतिहाइ क्यान्सर सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले लाग्छ – Health Post Nepal
२०७५ कार्तिक २७ गते १४:१९
नेपालमा क्यान्सररोगको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा पछिल्लो समय क्यान्सररोग एकदमै बढ्दो अवस्थामा छ । नेपालमा मात्रै नभई विश्वमै नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युमध्ये सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु क्यान्सरका कारण हुने गरेको छ । अन्य रोगको तुलनामा क्यान्सरबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ । विकसित मुलुकहरूमा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या केही कम भए पनि विकासोन्मुख देशमा भने अत्यधिक छ ।
नेपाल, भारत, चीनजस्ता मुलुकमा भने क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झन्–झन् बढ्दो छ । उपचारका लागि आउने क्यान्सरका नयाँ तथा पुराना बिरामीको चापलाई हेर्दा नेपालमा पनि क्यान्सररोगीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै छ ।
प्रदूषणमा भएको वृद्धि, खानपानशैलीमा व्यापक परिवर्तन, व्यापक औद्योगिकीकरण, औसत आयुमा आएको परिवर्तनजस्ता कुरा क्यान्सररोग बढ्नुका कारण हुन् ।
मुटुरोग विशेषज्ञ भन्छन्, विश्वमा नसर्ने रोगका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु मुटुरोगका कारण हुन्छ । क्यान्सर विशेषज्ञका रूपमा तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ, क्यान्सर पहिलो हो । वास्तवमा हो चाहिँ के ?
सन् २०१६ सम्म नसर्ने रोगमध्ये विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्युको कारण मुटुरोग थियो । तर, सन् २०१६ पछि सबैभन्दा बढी मृत्यु क्यान्सररोगका कारण हुने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसैले अहिले नम्बर १ किलरका रूपमा क्यान्सररोग रहेको छ । विश्वमा वार्षिक लगभग ८० देखि ९० लाखको हाराहारीमा मानवीय मृत्यु क्यान्सररोगका कारण हुने गरेको छ । नेपालमा करिब ६० हजारभन्दा बढी संख्यामा क्यान्सररोगी रहेको अनुमान छ । बर्सेनि २५ हजार नेपालीलाई क्यान्सर हुने गर्छ । त्यसमा करिब १५ देखि २० हजारको मृत्यु गरेको अनुमानित तथ्यांक छ ।
क्यान्सर जीवनशैलीसँग कति जोडिएको छ ?
क्यान्सररोग जीवनशैलीसँग अत्यन्त सम्बन्धित छ । मानिसको औसत आयु नै अहिले बढेको छ । पहिले–पहिले मानिसहरू ५०–६० वर्षमै मर्ने गर्थे भने अहिले ८०–९० वर्षसम्म बाँच्ने गर्छन् । क्यान्सररोग, जीवनशैली, भोगाइ, बानीका कारणले पनि लाग्ने गर्छ । उमेर पुगेका मानिसमा क्यान्सरको समस्या बढ्ने भएकाले औसत आयु बढ्नुले पनि क्यान्सररोग बढेको हो । ३३ प्रतिशत क्यान्सररोग धूमपान, मद्यपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने गरेको छ । क्यान्सरको एकतिहाइ कारण सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो । १० प्रतिशत क्यान्सर वंशानुगत कारणले लाग्ने गर्छ । प्रदूषण, विभिन्न प्रकारका संक्रमण, खानपान, जीवनशैलीका कारण पनि क्यान्सररोग लाग्ने गर्छ । पुराना, ढुसी परेका, पोलेका तथा नुनिला खानेकुराको अत्यधिक सेवनका कारण पनि क्यान्सररोग लाग्ने गर्छ । मानिस जति धेरै स्वच्छताबाट टाढा जान्छ, त्यति नै हरेक दिन उसको शरीरमा विभिन्न कुराले हमला गरिरहेका हुन्छन् । उक्त हमलालाई कुनै दिन हाम्रो शरीरले थेग्न सक्दैन, त्यसैको फलस्वरूप क्यान्सररोग सुरु हुन्छ । त्यसैले क्यान्सररोग मानिसको जीवनशैली, खानपान तथा व्यवहारसँग सम्बन्धित हुन्छ भने थोरै मात्रामा वंशानुगत हुन्छ ।
विश्वमा उपचारको क्षेत्रमा धेरै ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । आज एचआइभी एड्सको पनि उपचार सम्भव छ । क्यान्सर पहिलो र दोस्रो अवस्थामा भएमा ठिक हुन्छ । तर, तेस्रो र चौथो अवस्थामा पुगेको क्यान्सररोग नेपालमा मात्र नभई संसारका कुनै पनि ठाउँमा निको पार्न सकिँदैन ।
क्यान्सररोग नेपालमा दिन–प्रतिदिन बढ्नुका कारण के होलान् ?
नेपालमा क्यान्सररोग बढ्नुको मुख्य कारण धूमपान बढ्नु नै हो । आधुनिकता बढेसँगै नेपालीको जीवनशैलीमा आएको व्यापक परिवर्तनका कारण पनि क्यान्सररोग बढ्दै गएको हो ।
क्यान्सररोग उमेर समूहमा कतिको भर पर्छ ?
मानिसको उमेर बढेसँगै क्यान्सरको जोखिम पनि बढ्दै जाने गर्छ । तर, कम उमेरमा चाहिँ क्यान्सर नहुने नै भन्ने चाहिँ हुन्न । ४० वर्ष उमेर कटिसकेपछि क्यान्सरको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ । विश्वभरिको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने महिला तथा पुरुष दुवैमा यसको जोखिम बराबरी मात्रामा नै पाउन सकिन्छ । बच्चा जन्मिएपछि करिब १५ वर्षसम्म हुने बाल्यावस्थाको क्यान्सर पनि हुन्छ । त्यसपश्चात् ४० वर्षसम्म क्यान्सर निकै नै कम हुने गर्छ । ४० वर्ष नाघिसकेपछि मानिसमा फेरि क्यान्सरको जोखिम बढ्दै जान्छ । बच्चामा हुने क्यान्सरको प्रमुख कारण वंशानुगत हो । जन्मनेवेलै खराब जिन लिएका कारण पनि बच्चामा क्यान्सर हुने गर्छ । बच्चामा बढी मात्रामा रक्त क्यान्सर तथा टाउकोको क्यान्सर प्रमुख मानिन्छन् ।
नेपालका अस्पतालहरूमा क्यान्सररोगको उपचार अवस्था कस्तो छ ?
विश्वमा उपचारको क्षेत्रमा धेरै ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । आज एचआइभी एड्सको पनि उपचार सम्भव छ । क्यान्सर पहिलो र दोस्रो अवस्थामा भएमा ठिक हुन्छ । तर, तेस्रो र चौथो अवस्थामा पुगेको क्यान्सररोग नेपालमा मात्र नभई संसारका कुनै पनि ठाउँमा निको पार्न सकिँदैन । नेपालमा अझै पनि क्यान्सर रोकथामको क्षेत्रमा सरकारको नीति नै छैन । सरकारले क्यान्सररोग न्यूनीकरणका लागि न योजनाबद्ध रूपमा अस्पतालको संख्या बढाएको छ, न उपचारका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा ध्यान दिएको छ, न त उपचारका लागि आवश्यक उपकरण खरिदमै ध्यान दिएको छ । बर्सेनि भयावह रूपमा बढिरहेको क्यान्सरको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सरकारीस्तरका क्यान्सर अस्पतालमध्ये भरतपुर क्यान्सर अस्पतालले भने राम्रो काम गरिरहेको छ । अहिले धेरै क्यान्सर अस्पताल निजीस्तरबाट मात्रै निर्माण भएका छन् । सरकारले यसरी भयावह रूपमा बढिरहेको क्यान्सरको उपचारमा खासै ध्यान दिएको छैन ।
क्यान्सररोगको नेपालमा नै उपचारको सुरुवात हुनु एउटा राम्रो पक्ष हो । नेपालको कुनै एउटा अस्पतालमा पनि क्यान्सररोगका लागि चाहिने सबै प्रकारका सेवा बिरामीले पाउन सक्ने अवस्था अझै पनि छैन । तर, हाम्रो अस्पतालमा क्यान्सररोगका लागि रेडियसन, किमोथेरापीलगायत सम्पूर्ण सेवा–सुविधा उपलब्ध छन् । अझै पनि गाउँ–गाउँका क्यान्सररोगीको उपचारमा पहुँच छैन ।हाम्रो अस्पतालमा क्यान्सरको सबैखाले उपचार सम्भव छ । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले जति नै अगाडि बढेर एउटास्तरसम्म ल्याए पनि सरकारको प्रयासविना सबैमा उपचारको पहुँच पुर्याउन सकिँदैन । यसका लागि सरकारले एउटा नीति नै बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
नेपाल र विदेशको क्यान्सर उपचारमा के–कस्तो भिन्नता छ ?
अबका दिनमा एउटा बिरामीले नेपालमा र विदेशमा पाउने उपचार सुविधामा खासै भिन्नता छैन । नेपालमा केही वर्षअघि रेडियोथेरापीका लागि मेसिन उपलब्ध थिएन । त्यसका लागि भारत अथवा अन्य मुलुक नै जानुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले देशमै त्यस्ता उपकरण आएका छन् । हाम्रो अस्पतालमै रेडियोथेरापीको मेसिन आएको ३ वर्ष भइसकेको छ । त्यसका साथसाथै पहिले किमोथेरापी, रेडियोथेरापी तथा सर्जरीमा समेत त्यति प्रभावकारी उपचार थिएन । आजका दिनमा ती सबै सम्भव भएका छन् । नेपालमा भारतभन्दा धेरै सुपथ मूल्यमा सबै प्रकारका क्यान्सरको समान गुणस्तरको उपचार सम्भव भएको छ । यो लामो समयको उपचार भएकाले विदेशमा लामो समयसम्म बस्नुपर्ने समस्याको समेत हल भएको छ ।
क्यान्सरको उपचार त्यति सहजचाहिँ छैन । यसका औषधि तथा प्रविधिहरू महँगा छन् । तैपनि भारतको तुलनामा भने नेपालको उपचार सस्तो छ । भारतभन्दा नेपालमा क्यान्सरको उपचार ५० प्रतिशत सस्तोमा पाउन सकिन्छ ।
नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारका के–कस्ता प्रविधि उपलब्ध छन् ?
क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रविधि नेपाल क्यान्सर अस्पतालमा उपलब्ध छन् । क्यान्सरका सबै किसिमका सर्जरी यहाँ हुन्छन् । निको नहुने बिरामीका लागि एक छुट्टै वार्डको समेत व्यवस्था छ । किमोथेरापी, रेडियोथेरापीलगायत सबै प्रविधि यहाँ उपलब्ध छन् । पेटस्क्यान प्रविधि पनि नेपालका अस्पतालमा उपलब्ध छ । पेटस्क्यान एउटा नयाँ प्रविधि हो, जसले क्यान्सर छ कि छैन भनी पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । कुनै पनि अवस्थामा क्यान्सर लागेको हो–होइन भन्ने पत्ता लगाउन यस प्रविधिबाट सिटी स्क्यानजस्तै एकप्रकारको स्क्यान गर्ने गरिन्छ । यस प्रविधिको प्रयोग गर्ने समयमा आइसोटोप नामक एक इन्जेक्सनको प्रयोग गरिन्छ । यो क्यान्सरको ट्युबर कोषमा मात्र गएर बस्छ । यो प्रविधि क्यान्सर भए–नभएको पत्ता लगाउन वरदान नै साबित भएको छ । यो प्रविधिले शतप्रतिशत नभई ८० देखि ८५ प्रतिशत क्यान्सररोग लागे–नलागेको पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ । यो प्रविधि नेपालमा सुरु भएको भर्खरै १ वर्ष मात्रै भएको छ । क्यान्सरको उपचारमा शल्यक्रिया, किमोथेरापी, रेडियोथेरापी गरी जम्मा ३ वटा प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ ।
उपचारमा बिरामीको पहुँच कत्तिको छ ?
नेपाल विकासोन्मुख देश भएका कारण पनि क्यान्सरको उपचारमा नेपालीको पहुँच नभएको हो । नेपाल सरकारले क्यान्सररोगीलाई दिएको १ लाख रूपैयाँ अनुदान पर्याप्त नभएका कारण हामीले नेपाल सरकारलाई त्यसमा फेरबदल गर्न सल्लाहसमेत दिँदै आएका छौँ । आगामी दिनमा क्यान्सररोगीका लागि छुट्टै बिमा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । मानिसले आफ्नो आयको निश्चित भाग कटाएर संकलन गरेमा उपचारमा सहज हुन्छ ।